mmekọahụ dysfunction, ọ bụ ezie na dị nnọọ nkịtị, bụ a isiokwu nke ọtụtụ ndị zere ma ọ bụ na-eme ihere ikwu okwu banyere. Tupu ekwu okwu banyere mmekọahụ nsogbu, ọ dị mkpa ịmara banyere mmekọahụ omume okirikiri. The mmekọahụ omume okirikiri bụ a anọ-phased usoro nke anụ ahụ na nke mmetụta uche mgbanwe na-ewere ọnọdụ ịkwa agụụ mmekọahụ. The zipụta ha n'usoro anọ n'ụzọ na-: obi ụtọ, ala dị larịị, orgasm, na mkpebi. mmekọahụ dysfunctions, Ya mere, bụ ịkwa nsogbu na-eme n'oge ọ bụla nke n'ụzọ nke mmekọahụ omume okirikiri nakwa na gbochie inweta nke emeju agụụ mmekọahụ ọ bụla na mmekọahụ-akpali akpali ọrụ, dị ka imetọ onwe na mmekọahụ. Mmekọahụ dysfunctions metụta ma okenye ikom na ndị inyom ma na ahụkarị na ndị inyom karịa ikom. Ọtụtụ ikpe mmekọahụ dysfunctions bụ ngwọta.
Ụdị mmekọahụ Dysfunctions na Women
E nwere anọ bụ isi bụ mmekọahụ dysfunctions na a na ahụkarị na ndị inyom. Ndị a bụ:
Ekwughị ma ọ bụ obere agụụ mmekọahụ: Nke a bụ nnọọ ala libido ma ọ bụ enweghị mmekọahụ na-agụ. Ndị mmadụ na-akpata nsogbu anụ ahụ na / ma ọ bụ ọgwụ na-akpatara ndị mmekọahụ dysfunctions.
Mmekọahụ agụụ aghara: Nke a na-adị mgbe a nwaanyị na-aghọ frigid na-enweghị ike ma ọ bụ na-kpaliri ka ọ bụla mmekọahụ stimulations.
Enweghị Ugboro mmekọahụ njedebe: Nke a bụ mgbe a nwaanyị mgbe niile ada ada iji nweta orgasms, si otú na-eduga na obi nkoropụ na mmekọahụ eme.
-egbu mgbu mmekọahụ: Mgbe ụfọdụ mere site mmamiri nkụ na ụfọdụ mmekọahụ ọnọdụ.
Ụdị mmekọahụ Dysfunctions na Men
Low libido ma ọ bụ enweghị ọchịchọ nke inwe mmekọahụ.
Erectile dysfunctions - enweghi ike nweta ihe erection ma ọ bụ ịnọgide na-enwe otu.
Akaghi ejaculations ma ọ bụ enweghị ike ejaculate n'oge nile nke mmekọahụ eme.
Akpata Mmekọahụ Dysfunctions Ndị na-akpata ịkwa dysfunctions nwere ike ga-grouped n'ime abụọ: anụ ahụ ma ọ bụ ọgwụ na-akpata, na psychological na-akpata. The ọgwụ na ahụ ike na anụ ahụ na-akpata na-:
Mmetụta nke ọgwụ
Akụrụ na umeji ọrịa
mmiri ọgwụ ahụ ahaghị nhata
The psychological na-akpata bụ n'ihi nke n'ozuzu ọgba aghara nke uche. Ụfọdụ n'ime ha bụ:
N'elu-eche echiche na nchegbu
Mgbaàmà nke Mmekọahụ Dysfunctions na ma ndikom ma ndinyom
Mgbaàmà nke mmekọahụ dysfunctions bụ a ọrụ nke ụdị nke na-anaghị ekwe na ma ndị ikom ma ndị inyom, dị ka: ala ma ọ bụ abiaghi mmekọahụ na-agụ, enweghi ike nwere ma ọ bụ ịnọgide na-enwe agụụ n'oge mmekọahụ, Enweghị ike na-enweta ihe orgasm, ihe mgbu n'oge mmekọahụ, nsogbu na ịrụzu semen, na ihe isi ike na-ma ọ bụ na-anọ chịm.
Diagnoses nke Mmekọahụ Dysfunctions
E nwere ihe abụọ bụ isi diagnoses nke mmekọahụ dysfunctions:
The psychological nwale na mere a zụrụ azụ therapist dabeere Ajụjụ ọnụ pụta banyere mmekọahụ akụkọ ihe mere eme na ugbu a mmekọahụ mbipụta, mgbe pelvic nnyocha na-emekarị mere n'ebe ndị dysfunction nwere ihe odide ọgwụ akpata dị ka thinning nke Genital nsụkọrọ na-ebelata akpụkpọ ekwedo.
Ọgwụ nke Mmekọahụ Dysfunctions
Open nkwurịta okwu na-enwe mmekọahụ n'isiokwu.
Ime mmalite site na-agbalị ọhụrụ eme na ọnọdụ, iji kpalie agụụ ihe ndị dị ka videos, akwụkwọ, ngwaọrụ, wdg. na onwe imetọ onwe.
N'ibelata-egbu mgbu ọnọdụ dị ka ihe mgbu nwere ike ịnapụ ụtọ na ọrụ.
izere ịṅụbiga mmanya, oké oriri nke ọgwụ ọjọọ, na ise siga.
-Emeso nke ọma na nchegbu, ọnọdụ swings, ịda mbà n'obi na nchegbu.
Na-agba ume na-abụghị coital agwa ndị dị otú ahụ dị ka ọnụ nwee mmekọahụ, imetọ onwe, wdg.
-Achọ ndụmọdụ site zụrụ azụ na-agwọ ọrịa na isiokwu.
mgbe nile na-egosipụta.
Zuru ezu ntụrụndụ na-atụrụ.
Ụfọdụ ọgwụ ọjọọ eme ihe dị ka Viagra, Levitra na cialis nwekwara ike a ga-eji maka ọgwụgwọ nke ụfọdụ mmekọahụ dysfunctions na ndikom. Ha n'ụzọ dị mfe n'ebe nile ma ha na-achọ doctoral prescriptions.
-Akpa na-ekwu okwu on "mmekọahụ Dysfunctions: ụdị, akpata, mgbaàmà, na Ọgwụ"
Debit kaadị ụbọchị ịkwụ ụgwọ mgbazinye ego na-ngwa-ngwa-aghọ n'aka oke maka online borrowers na lenders. Ọ bụ ngwa ngwa, ọ…